Fri, Jun 5, 2020 at 3:59am
टेकुस्थित शुक्रराज सरुवा रोग तथा ट्रपिकल अस्पतालमा दैनिक दुई सय जना कुकुरले टोकेर रेबिजविरुद्धको सुई लगाउन आउने गरेका छन् । ‘‘दैनिक रूपमा दुई सयको सङ्ख्यामा रेबिजविरुद्धको सुई लगाउन आउनेको सङ्ख्याले पनि प्रष्ट हुन्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै मानिसलाई कुकुरले टोक्ने गरेको छ । कोही व्यक्ति भने लक्षण देखिसकेपछि उपचारका लागि आउने गर्छन्,’’ अस्पतालका प्रवक्ता तथा प्रमुख कन्सलटेन्सी डा. अनुप बास्तोलाले
यसैबीच विश्व रेबिज दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ । हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २८ का दिन विश्व रेबिज दिवस मनाउने गरिन्छ । यो वर्ष ‘‘खोप लगाऔँ, रेबिज उन्मूलन गरौँ,’’ भन्ने नाराका साथ विश्व रेबिज दिवस मनाइयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जाउलाखेलस्थित चिडियाखानामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी विश्व रेबिज दिवस मनाएको छ । सो अवसरमा विद्यार्थी तथा चिडियाखाना आउने व्यक्तिलाई रेबिजबारे जानकारी दिइएको थियो । महाशाखाकी जुनोटिक शाखाकी डा. रोशिका श्रेष्ठले विद्यार्थीलाई रेबिजबारे जानकारी
रेबिजविरुद्व पहिलो पटक प्रभावकारी खोपको विकास गर्ने वैज्ञानिक लुई पास्चरको निधन भएको दिन सेप्टेम्बर २८ मा उहाँको योगदानलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष रेबिज दिवस मनाउने गरिएको हो । रेबिज लागेका कुकुर, स्याल, बिरालोलगायत पशुको टोकाइबाट मानिस र अरू स्तनधारी प्राणीमा सर्ने रेबिज प्राणघातक रोग हो । डा. श्रेष्ठले रोगका जीवाणुहरू रोगी पशुको ¥यालमा रहने भएकाले त्यस्ता पशुले टोक्दा घाउसँगै मानिसको शरीरमा प्रवेश गरी रोग उत्पन्न गर्ने बताउनुभयो । गोरखापत्रबाट